किन कलेजी देखियो म्यासेञ्जर ? - Nawalpur News
कोरोना संक्रमण नवलपुर मध्यविन्दु नगरपालिका लकडाउन मृत्यु #दुर्घटना #नेपाल नवलपरासी पुर्ब नेकपा
काठमाडौं ,कार्तिक ५।
यदि तपाईंले भर्खरै फेसबुक म्यासेञ्जर एप अपडेट गर्नु भएको छ भने पक्कै पनि केही न केही परिवर्तन भएको अवश्य महसुस गर्नु भएकै होला । फेसबुकले निलो र सेतो कलरमा रहेको यस अघिको लोगोमा केही नयाँ कलर थपेको छ ।
कम्पनीका अनुसार भविष्यको म्यासेजिङको प्रतिबिम्बको रुपमा नयाँ लोगो ल्याइएको हो । जसले थप गतिशिल, रमाइलो र मानिसहरुसँग नजिक रहन इन्टिग्रेटेड फिचरलाई समग्र रुपमा अभिव्यक्त गरेको छ ।
तर कतिपयलाई सेतो र निलो रंगमा रहेको लोगोमा कलेजी र निलो रंगको ग्रेडियन्ट भरेको त्यति मन परेको छैन । तर फेसबुकले यो केवल लोगोको परिवर्तन मात्र नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
पछिल्लो समय कम्पनीले भिडियो कन्फ्रेन्सका लागि रुम, इन्स्टाग्रामसँगको इन्टिग्रेसन लगायतका थुप्रै नयाँ फिचर म्यासेञ्जरमा थप गरिरहेको छ । नयाँ लोगोसँगै कम्पनीले प्रयोगकर्ताको च्याटलाई थप रंगमय बनाउन सकिने गरी च्याट थिम पनि रोलआउट गरेको छ ।
यसका साथै थप फिचर चाँडै आउने बताइएको छ । जसमा सेल्फी स्टिकर र भेनिस मोड समेत रहेका छन् । यसले प्रयोगकर्तालाई निश्चित समयपछि म्यासेज स्वतः आफै बिलाउने गरी सेट गर्न सकिने सुविधा समेत दिनेछ ।
साथै म्यासेञ्जरका कतिपय फिचर इन्स्टाग्राममा समेत थपिँदैछन् । यद्यपी कम्पनीले केही फिचर म्यासेञ्जरभन्दा पहिला इन्स्टाग्राममा उपलब्ध हुने जनाएको छ ।
यो नयाँ घोषणामा फेसबुकले म्यासेञ्जर र इन्स्टाग्रामबीच चाँडै क्रस प्लेटफर्म सञ्चार गर्न सकिने भन्दै त्यसको सुरुवात उत्तरी अमेरिकाका प्रयोगकर्ताबाट हुने उद्घोष समेत गरेको छ ।
साभार : टेकपाना
नारायणगढ–मुग्लिन सडक भएर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ?
नवलपुरबाट लागु औषध सहित ३ युवा पक्राउ
नवलपुरको विनयी त्रिवेणीमा आफ्नै बाबुद्धारा छोरीको बलात्कृत
नवलपुरमा गैंडाको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु
गैंडाकोटका दुई युवा लागुऔषध सहित पक्राउ
बिष्णु निरौलाको “चट्ट कपाल कोरेर”
देवचुलीका सवै वडामा फाल्गुन २३ गतेबाट कोभिड खोप अभियान
फोन नम्बर:+977-9851135484 9807572268,9847095131